Mashiinka kafeega ee ugu fiican marka la barbar dhigo tijaabada. Tilmaamaha Hagaajinta.
Start qoyska qalabka mashiinka kafeega
1 Cagaarka qaxwaha saxda ah - dhadhanka ayaa ku jira maaddooyinka
2 Digirta qaxwaha saxda ah iyo daaqada saxda ah
3 Heerka u dhiganta ee is-qabashada: furaha guusha
4 Heerkulka saxda ah ee espresso
5 Baahinta joogtada ah - damaanada qarsoodiga ah ee dhadhanka wanaagsan
6 Sidee si sax ah loo dejiyaa?
7 Maxaad u fiirsataa?
8 Koofiyadaha hal mar oo dib loo isticmaali karo
9 Hawlgalka mashiinka kabaha
10 Mashiinka kaabsoolka: Maqnaanshaha, nadiifin, dhakhso
11 Qaxwaha sifeeya ee caadiga ah: Habka dhirta la xaqiijiyay
12 Siebträgermaschine: Barista farshaxanka sida goob nololeed
13 Mashiinka kafeega oo si buuxda u shaqeynaya: Kufsiyada hal-badhan
14 Dhibaatada dhadhanka sareeya ee aad uga qayb qaadatey
15 Shirkadahee ayaa ku sifoobey suuqyada nidaamyada kumbuyuutarka?
16 Horudhac: Nespresso
17 Tassimo ka soo jeeda Bosch
18 Krups - Dolce Gusto
19 Taariikhda mashiinka qaxwada
20 Faa'iidooyinka iyo faa'iido-darrada mashiinnada kaabayaasha
21 Gacanta ku hay wadnaha: Yaa iibsanaya mashiinka kaabsarka ee waxtar leh?
Cagaarka qaxwaha saxda ah - dhadhanka ayaa ku jira maaddooyinka
Waxba ma jiraan maxaa mashiinka kafeega Adiga ayaa go'aaminaya ama ku dhejinaya mashiinka aad horey u soo saartay qaxwadaaga, wadnaha qaxwaha dabiiciga ah ayaa si cad u qulqulaya digirta qaxwaha saxda ah.
Digirta qaxwaha saxda ah iyo daaqada saxda ah
Coffee waa badeecad dabiiciga ah iyo dhadhanka waa mid aan isku mid ahayn. Waxaa jira wadarta 103 noocyo kala duwan oo kafeega ah, laakiin faro badan oo ka mid ah kafeega 103. Noocyada ugu horreyn waxay ku saleysan yihiin labo digir: Coffea Arabica iyo Robusta. Ugu horeyntii 70% suuqyada, ugu dambeyntii 30%. Magacyada shaqsiyaadka coffees waxay badanaa muujiyaan macluumaad badan, sida habka beerashada, asalka, tayada ama dabeecadda.
Nooca kale ee muhiimka ah ee dhadhanka ayaa ah nooca dabka: Kaafiga kafeegu waa farsamo qarniyaal ah, dhadhanka kulul waxaa lagu go'aamiyaa heerkulka dabka iyo wakhtiga saliidda. Waqtiga dheeriga ah ee la dhalaalayo, madowgu wuxuu keenaa digirta iyo dhadhankiisa. Nadiifinta dheeraadka ah ayaa sii deynaya qaar ka mid ah dhadhanka adag. Sababtaas awgeed digirta kafeega ee qaxwaha ayaa lagu dubay keliya shan iyo daqiiqo 13, digirta espresso xitaa ilaa daqiiqo 20.
Philips HD7546 / 20 Gaia mashiinka qaxwaha leh ...
De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B -...
Krups Nespresso Khabiir iyo Caano XN6018 ...
Heerka u dhiganta ee is-qabashada: furaha guusha
ka bean iyo galidda sicir- ee qaxwaha laga reebo weli waa arrin muhiim ah kafeega wareega leedahay beduliyum. A kafeega dhadhankiisu wanaagsan soo bixin waa in lagu gartaa in bean la dagaan, iyada buuxa ee dhadhan. markii xiriirka biyaha inta lagu guda jiro geeddi-socodka yaynana kolna go'aan ku saabsan heerka uu shiididdu. Taas macnaheedu waa in xiriir gaaban ee biyaha, qaadhaan ugu bunka waa in ay ahaataa dhulka. Magac ahaan, waa sababta kafeega dhulka dhigto leedahay aag weyn dusha ka badan budo adag iyo bur qaadhaan sidaas maaddooyinka dheeraad ah la soo saaro kartaa waqti xiriir gaaban.
Sidaa darteed, ma aha oo kaliya tiknooloojiyada mashiinka waa mid u goosan kara dhadhanka kafeega. Waqti qaado oo waxaad ka heli kartaa digirta qaxwaha shakhsi ahaaneed iyo shukulaatada: Sidaas awgeed, nasashadaada qaxwaha waxay noqotaa marxalad aad u cakiran.
Heerkulka saxda ah ee espresso
Mashiinnada qaxooniga ee ku haboon sida mashiinnada kaabayaasha iyo mashiinada si buuxda u shaqeeya, waxaad si toos ah u heli doontaa dhibicda espresso la karkariyey riix batoonka. Haddii, si kastaba ha ahaatee, waxaad rabtaa inaad sameyso sharraxaad dhadhan leh leh mashiinka shaandhada leh, waxaa jira waxyaabo laga yaabo inay tixgeliyaan.
Barista waxay ogtahay in dhinacyo badan ay saameynayaan espresso qumman. Dabcan, heerka digirta ee digirta ee espresso digtoonaani waa mid xitaa, heerkulku waa inuu ku jiraa darajooyinka 90-94 iyo wakhtiga socodka waa tirooyinka 25. Iyada oo shuruudahan aasaasiga ah, espresso ayaa udub dhexaad u ah. Nacfaan-cawlaan leh, naas nadiif ah waa markhaan muuqaal ah oo loogu talagalay espresso oo guulaysatay.
Baahinta joogtada ah - damaanada qarsoodiga ah ee dhadhanka wanaagsan
Ma aha oo kaliya in bean iyo roastu waxay saamaysaa dhadhanka qaxwada, laakiin sidoo kale daryeelka joogtada ah ee mashiinka. Tani waa sababta oo ah lime waxaa lagu sii daayaa kuleylka biyaha, taas oo la dhigo ka dib markii mashiinku qaboojiyay oo sidaas awgeed jebin karo tuubooyinka. Haddii mashiinka qaxwadaagu uu yahay qaali, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa daryeelka saxda ah isla markaasna mashiinkaaga dib-u-hagaajinta waqtiyada caadiga ah.
Inkastoo biyaha tuubada waa ammaan in la cabbo, laakiin waa shamiindo iyo content liin kala duwan ballaaran ku xiran tahay meesha aad ku nooshahay. Si aad wax badan oo ku saabsan content lime ah biyaha tuubada aad ku barato, waxaad codsan kartaa macluumaad this shirkadda biyahaaga - ama xataa loo qiyaaso la isticmaalayo imtixaanka gaar ah lehna qalbi engegnaantiinna aawadeed biyo aad.
Sidaas daraadeed waa lagugula talinayaa in aad dib u habeyn ku sameyso mashiinka qaxwadaaga si joogto ah. Haddii mashiinku dhawaaqayo dhawaaq weyn marka qaxwaha la soo dhejiyo, tani waa calaamad muhiim u ah in jaantuskii ugu dambeeyay uu horey u ahaa. Maqnaanshaha kaydka qashinka ah, socodka biyuhu waa la yareeyaa, mashiinku wuxuu noqonayaa mid sii kordhaya, oo kor u qaada koronto badan, iyo ugu dambeyn laakiin ugu yaraan, kraatooyinku sidoo kale waa la la'yahay.
Laakin iska ilaali: keydka qashinka ah ee maaha oo kaliya in uu saameynayo carafka qaxwada, laakiin sidoo kale waxay si joogto ah u waxyeeleyn karaan tiknoolajiyada mashiinka. Sidaa awgeed, geedi socodka dhirta ayaa la kordhin karaa, jeexjeexyada ayaa noqda mid xiran, nolol maalmeedka mashiinka ayaa la gaabin karaa. Sidaas daraadeed waa lagugula talin karaa inaad isticmaasho sharraxaad joogto ah si looga hortago inay noqoto mid la kiciyo.
durgol swiss espresso wakiilka soo dejinta gaarka ah - Nadiifiyaha lime ee mashiinnada qaxwaha ah dhammaan noocyada iyo noocyada - nadiifinta fudud iyada oo aan lala xiriirin waqtiga iyo haraaga - nooca Ingiriisiga - Tusiyaha 2x125ml
Qalabka 'decalcifier dareeraha' wuxuu ku habboon yahay dhammaan mashiinnada qaxwaha, mashiinka suufka iyo kaabashka, mashiinnada espresso - xalka ugufiican ee kafeega kafeega qumman
Waad ku mahadsan tahay nadiifinta lime sare ee nadiifka ah, nadiifinta nadiifinta nadiifka ah waxay hubisaa nadiifinta nadiifinta iyada oo aan ka hadhin - ka dib marka la burburiyo oo la raaciyo, mishiinku waa cuntada cuntada
Waad ku mahadsan tahay qaaciddeeda ilaalinta iyo daryeelka, wakiilka kala jajabay wuxuu ku darayaa mashiinka qaxwada oo wuxuu hubiyaa tayada kookada ee ugu wanaagsan iyada oo loo marayo burburka waxtarka leh
A Dhalada '125ml Limescale Bottle' waxaa loogu talagalay inay si buuxda u beeniso sameeyaha qaxwaha waxayna ka saartaa lime si adag oo dhakhso leh, iyada oo aan lahayn waqti dheeri ah oo dheeraad ah - oo loogu talagalay codsi fudud
Baaxadda sahayda: 2 125 ml x descaler gaar ah durgol espresso Swiss - qaadidda dhamaystiran of limescale iyo daryeel kaamil ah mashiinka qaxwaha of dhammaan noocyada iyo noocyada
Sidee si sax ah loo dejiyaa?
Xaqiiqdu waxay tahay, asiidh way kala dhigtaa muraayada. Sida kala duwanaansho kharash-ool ah iyo bay'adda u ah, qaarna waxaa lagu talinayaa. Ka dib nadiifinta qalabka waa in la si fiican Canugii biyo nadiif ah si loo soo saaro acid qaarna si buuxda oo iska ilaali dhadhan dhanaan. Isticmaalka khal iyo nuxurka khal, si kastaba ha ahaatee, waa arrin lagu muransan yahay. Tani waa kakanaanta mashiinka. Waayo, halka Taageerayaasha ammaani awood lime-diridda ee khalka, waa in aan halkii quusan khal la mashiinada kaabsal si buuxda automatic iyo heysata filter, sababtoo ah waa sidaas u xoog badan in shaabadood caag weeraray iyo waxaa laga yaabaa in iska furan. laakiin taangiga biyaha si gooni gooni ah ku rakiban la nadiifin karin ama la qalbi nadiif ah oo khal. Hubi in ma harta khal gaaraan nabad ah oo kaliya in circuit mishiinka. Doorasho kale waa tabsaro gaar ah ama xargaha dareeraha. Hubso in kiimikada ay sidoo kale ku haboon tahay cuntada.
Maxaad u fiirsataa?
mashiinada kaabsal Coffee waxaa lagu gartaa xaqiiqada ah in iibka - taas oo ku xidhan nidaamka iyo qalabka, qiimaha at 70 in euros 300 - waa mid aad u awoodi karo, laakiin waxaa jira arimo dhowr ah inaan halkaan la soco in go'aanka wax iibsiga aad:
Iyadoo go'aanka ay ku iibsadaan mishiinka kaabsal ku xidhaa oo si kala duwan ee noocyada kaabsal aad. Inkasta oo uu jiro kala duwan oo badan ama ka yar badan oo Café Crema, macchiato latte, espresso iyo kafeega shukulaatada, kafeega la dhadhan vanilj ama shaah iyo latte Chai - si kala duwan waa la hubaa - laakiin doorashada ee kafeega ma aha dhawaad ​​sida weyn sida in Digirta dabacsan Intaa waxaa dheer, in qaar ka mid ah soo saarayaashu ay hormariyaan nidaamkooda, kuwaas oo aan loo isticmaali karin kaabayaasha kale. Sidaas daraadeed waa lagula talinayaa in aad hubiso in mashiinkaagu aqbalo noocyada kala duwan ee koofiyadaha sida ugu macquulsan. Dhanka kale, xataa qaar ka mid ah "generic" kaabsal waa dukaamada heli dhimis online ama ku haboon mishiinada loo yaqaan saarayaasha brand. Halkan waxaa lagu talinayaa in aad eegto liiska maaddooyinka ku jira kaabsal, maxaa yeelay, cheap ma u leeyihiin in ay ka dhigan tahay tayo isku mid liita!
Mashiinka Kapsule waxaa lagu gartaa xaqiiqda ah in ay soo saaraan dhammaan kakabka aadka u fiican. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal dhibic oo muhiim ah in la tixgeliyo: kharashka hawlgalka socda. Xitaa haddii kharashka iibsiga ee mashiinnada kumbuyuutarrada ay yihiin kuwo aad loo maamuli karo, kharashka qalliinka ayaa u geli kara lacagta muddo dheer. Sababta oo ah kaararka qarashka u dhexeeya 19 iyo 60 Cent, waa inaad ka warqabtaa inta koob ee kafeega aad cabto maalinta.
Mashiinka kumbuyuutarka ee Krups Nespresso XN6008, Habka kuleyliyaha kuleylka, kuleylka 19, bandhig madow
Khabiirka Krups wuxuu soo bandhigayaa naqshad sharaf leh, oo si toos ah ula xidhiidha casriga ama kiniiniga, sidaas awgeedna wuxuu u oggolaanayaa hawlgal casri ah oo habboon.
Goobaha horumarsan: 4 takhasuska kafeega (Ristretto, Espresso, Lungo, Americano)
function biyaha kulul
Iyada oo app App Connectivity waxaad diyaarin kartaa ugu heellan adiga oo si gaar ah u dejiya qadarka kafeega, biyaha kulul iyo heerkulka si aad u dhadhan
Waxaad isticmaali kartaa appka si aad u maamusho cuntooyinkaaga si aad u fudud una badbaadi cuntadaada.
Koofiyadaha hal mar oo dib loo isticmaali karo
In sano 90er Nestlé galisay mashiinka ay Nespresso jidka qaxwaha waa sakhraansan yahay in reerka casriga ah: Round 5 garaam oo ah budada dhulka kafeega immika waxaa buuxiyey oo ku yaal aluminium ama weel caag ah oo sii raagayaan. Astaanta ayaa ah kaabisku wuxuu ka hortagayaa aromaska ​​iyo nuugista qoyaanka. Tani waxay siinaysaa cabitaanka qaxwada ee dareeraha ah waayo aragnimo dhadhan sare leh!
Si kastaba ha noqotee, raaxada qayb ahaan ayaa sidoo kale wax soo saarka qashinka waaweyn uu soconayaa: Koobka kafeega waa qashin. Xitaa haddii farsamoyaqaanadu ballan-qaadaan in ay isticmaalaan qalabka sida jawiga deegaanka ugu macquulsan, tani ma bedesho xaqiiqda ah in isticmaalka kaararka mar keliya la isticmaalo.
Sababtan awgeed, shirkadda Swiss ee Coffeestar waxay soo saartey qabsashada qafiska ee dib loo isticmaali karo. Sidaa darteed, haddii aad rabto, waxaad ku raaxeysan kartaa kaafigaaga is-kaarka mashiinka kumbuyuutarka oo leh damiirka xiisa leh.
Hawlgalka mashiinka kabaha
Kaabashka mashiinka qaxwada waxaa lagu gartaa xaqiiqda ah in kabsashada ay suurtogal u tahay in ay soo saarto koob kasta oo koob leh oo leh qaxwal cusub oo aad u macaan. Kaabsarka leh qadarka saxda ah ee budada ah ee khaas ahaan qaxwada qaxwada ayaa lagu meeleeyaa qalabka mashiinka. Kufsigu waa la xakameynayaa badhanka batoonka iyo biyaha kulul waxaa lagu qasbay cadaadis aad u sareysa. Just seconds ka hor intaan la soo dhejin, kabsashada waa la furay oo qadarka saxda ah ee biyaha ayaa hela sida ugu fiican ee bean! In ka yar hal daqiiqo waxaad ku raaxeysan kartaa burooyinkooda dhadhanka ah - oo aan lahayn walxo qadhaadh. Si dhakhso ah, nadiif ah oo buuxa - ma yaabin mashiinnada qalabka kaabaha ah ee horey loo sii wado.
Mashiinka mashiinka, mashiinka qaxwaha, mashiinka shaandhada ama mishiinka mishiinka - Mashiinka waxa uu sameyn karaa?
Waxyaabaha soo socda waa soo koobid kooban oo ku saabsan sifooyinka gaarka ah ee mashiinnada kala duwan:
Mashiinka kaabsoolka: Maqnaanshaha, nadiifin, dhakhso
Mashiinka kumbuyuutarka ayaa ku raaxeysta raaxada loo adeegsado, xawaaraha diirimaadkeedana - si cad - iyada oo loo marayo khibradaada dhadhanka. Tiknoolajiyada iyo casriyeynta kaabashadu waxay suurtogal u tahay in xitaa noocyada jaban ay soo saari karaan qaxwal aad u fiican. Waa mid cajiib leh, iyada oo ah xawaare ka mid ah kafeega la diyaarin karo.
Dheeraad ah oo dheeraad ah waa faa'iidada raaxada: adigoon dooran kaliya dhadhankaaga, ku rid shubka ku habboon iyo waayo-aragnimada dhadhanka oo dhan waa la damaanad qaadayaa. Uma baahnid inaad ka welweshid qadarka kaafiga qaxwada, waxaadna soo saari kartaa takhasusyo kala duwan oo kafeega ah - iyadoo ku xiran dhadhankaaga. Sidaas daraadeed, waa caddayn in inta badan dadka shaqeeya ee ilaa 35 ay ku riyaaqayaan mashiinadan.
Qaxwaha sifeeya ee caadiga ah: Habka dhirta la xaqiijiyay
Mashiinka qaxwaha ee caadiga ah ee qaxwaha kafeega ayaa leh heerka ugu sarreeya ee qoysaska: haddii ay ku jirto qaybta hoose ee ardayda ama dadka hawlgabka ah, tiknoolajigu wuxuu leeyahay jajabkiisa - tanina si xowli ah.
Faa'iidooyinka ayaa ah in qamriga caadiga ah ee qaxwaha lagu diyaarin karo tiro badan iyo in cabitaannada qaxwada ay bixiyaan xulasho ballaaran oo digir ah - taasoo ka dhigaysa wadnaha garaaca kafeega garaaca. Dhibaatada halkan waa, si kastaba ha ahaatee, macmacaan cusub ayaa macaan. Sababtoo ah budada qaxwaha waxaa badanaa lagu kaydiyaa baakado waaweyn waxayna lumisaa dhadhanka si joogto ah kadib marka la furo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira farsamooyin farsamo oo xiiso leh oo ku yaala mashiinnada qashinka shaandhada sida kaafiyeyaasha isku dhafan ama diyaarinta xumbada caanaha kaas oo lagu dhejin karo mashiinka. Sidaas awgeed, mashiinnada qamriga ee caadiga ah ayaa sidoo kale ballaadhiya badeecadahooda.
Siebträgermaschine: Barista farshaxanka sida goob nololeed
Mashiinka gawaarida ee miyir-beelka ayaa loogu talagalay kuwa loo yaqaan 'espresso' kuwaas oo doonaya inay bartaan farsamooyinka farsamada ee barista ama waxay baranayaan iyaga - sababtoo ah mashiinka noocan oo kale ah ayaa qayb ahaan aad u adag in la isticmaalo. Intaa waxaa dheer, diyaarinta a espresso leh mishiinka qashin-qaadashada waa mid aad u yar ama aan la dabaaldegin, mid ayaa waqti qaadata si uu u qariyo digirta marka hore kadibna naso Espresso oo ku raaxaysta. Taas macnaheedu waxa weeye, si kastaba ha ahaatee, qalabka dheeraadka ah waa in la iibsadaa oo kaliya ma ahan kiiska kaliya ee mareenka shaandhada oo keliya.
Haddii aad baasana farshaxanka Siebträgermaschine, aad ku raaxaysan karaan espresso ugu fiican dhadhankiisu iyo xor ah tijaabada la Kumaan digirta espresso. Marka la barbardhigo nidaamyada kale ee makiinadaha, si kastaba ha ahaatee, shaashadaha waa qaali inay iibsadaan.
Mashiinka kafeega oo si buuxda u shaqeynaya: Kufsiyada hal-badhan
Mashiinka si buuxda u shaqeynaya wuxuu awood u siinayaa inuu soo qabsado khibradaha kaafiga ah adigoo riixaya badhanka. Sida mashiinka kumbuyuutarka, waxaad sidoo kale soo saari kartaa waxyaabaha ugu kala duwan ee habka ugu fudud ee mashiinka si toos ah.
Waxyaabaha wax ku oolka ah ee mashiinnadani waa in digirta ay yihiin dhul cusub ka hor inta aan la soo saarin sidaas daraadeed dhadhanka dhadhanka ugu fiican ayaa la damaanad qaadayaa. Intaa waxaa dheer, dhanjirta waxaa loo isticmaali karaa - ka dib dhan, digirta kafeega ee kilos ka jaban yahay ka mid ah capsule. Faa'iidada ku habboon nidaamka kaabsadaha waa, sidaa daraadeed, in ay si fiican ugu habboon tahay cabitaanada badan. Si kastaba ha noqotee, mashiinada si buuxda u shaqeeya waxay u baahan yihiin nadiifin iyo dayactir joogto ah khasaare ayaa ka mid ah si buuxda automatic, si kastaba ha ahaatee, waa in ay gudaha u adag - in la dayactiray si joogto ah iyo haddii ay dhacdo Gaf si toos ah qofka hermuss xirfad leh - oo ka kooban cutubyo yaynana kolna iyo tuunbooyinka.
Waayo aragnimada dhadhanka fiican
Kaabsigu waa fure u ah isticmaalka qayb ahaan: koofiyadu waxay ilaalinaysaa qaxwaha cusub ee qaxwada ah ee cusub iyo wuxuu dhajin karaa dhadhankiisa xilliga dhirta.
Maadaama maaddada kondhomku ay tahay mid cusub oo si gooni ah loo qaybiyay, kafeega kasta wuu ku guuleeystaa. Sababtaas awgeed, mashiinnada 'capsule' ayaa sidoo kale aad ugu fiican baaritaanada marka ay timaado muuqaalka, urta, dhadhanka iyo dhadhanka cuntada ee natiijada kafeega. Ilaa hadda sida aragnimada dhadhanka ay u khusayso, koofiyadaha ayaa bixiya: dhadhanka iyo dhadhanka lumis - adieu!
Shirkadahee ayaa ku sifoobey suuqyada nidaamyada kumbuyuutarka?
Yaa yihiin kuwa ugu muhiimsan ee loo adeegsado suuqyada nidaamyada kumbuyuutarrada?
Mashiinnada kumbuyuutarka ayaa wali koraya. Sida laga soo xigtay Ururka Cafiska Jarmalka, waxaan cabnaa celcelis ahaan 150 litir sannadle ah - kani wuxuu ka dhigayaa cabitaan cabitaan nala jecel, oo aan ka qaadano wax ka badan biyaha ama biirka. Sababta maahan in shirkadaha badani ay ku tartamaan waxyaabo waaweyn oo loogu talagalay macaamiisha Jarmalka. Waxyaabaha soo socda ayaa ah dulmar guud oo ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee suuqa:
Guusha suuqa waa mid aan dheereyn ka hor intaan suuqa laga bilaabo suuqa 90. Tani waxay isbedeshay 2000ers. Mashiinku wuxuu ahaa tamar dhamaystiran oo kaabayaashu markii hore oo keliya ayaa laga heli karaa kaliya Netspresso boutiques iyo internetka ayaa ballanqaaday waayo-aragnimo dhadhan oo aan hore loo arag. Nespresso waxay xooga saartaa xaqiiqda ah in ay jiraan noocyo kala duwan oo kala duwan si ay u sameeyaan xulasho sax ah ee dhadhan kasta oo kafeega ah.
Tassimo ka soo jeeda Bosch
Iyadoo nidaamka Intellibrew, mashiinnada ka soo jeeda Bosch waxay isticmaalaan tiknoolajiyada casriga ah ee casriga ah. Qalabka loogu talagalay Tassimo waxaa la yiraahdaa T-Disk oo mashiinku wuxuu akhriyaa scan lambarka barku ku daabacay T disk. Mashiinka barkinta, mashiinku wuxuu dejiyaa macluumaadka ku saabsan nooca cabitaanka uu yahay iyo waxay dejineysaa tirada biyaha loo baahan yahay ama cadaadiska dhirta si madaxbannaan. Tani waa sida qaxwaha caqliyeed oo caqli badan oo ka shaqeeya 21. Century.
Tassimo maahan sabab la'aan mashiinka ugu caansan: kala duwanaanshaha T-Disks waxaa ka mid ah 40 kala duwan ee cabbitaanada kala duwan oo ka kala yimid Latte Macchiato, Chai Latte ilaa Cadbury Cocoa.
highlight ee mishiinka kaabsal Dolce ragaxdaa waa wax iska cad in aad diyaarin kartaa in lagu daro cabitaan kulul iyo cabitaanka qabow cabdo sida qowladda ice-cream ama shaah qabow. Tani waa midka aan la isku haleyn karin ee mashiinka Krups. Muuqaal kale oo gaar ah ayaa ah in Krups ay sidoo kale bilaabeen mashiinnada qalabka kumbuyuutarka ee suuqa. Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad yeelatid xoogaga cabitaankaaga adigoo isticmaalaya biyo nadiif ah. Diyaargarow shakhsiyeed gaar ah, si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan tahay tijaabin badan iyo dareenka faraha illaa illaa mid ka mid ah uu helay meel ku haboon.
Taariikhda mashiinka qaxwada
Tan iyo sannadkii 70 ee 20. Mashiinka kafeega lama sheegi karo iyada oo aan guryahayaga. Laakiin sidee ayay u dhacday
1818 ayaa la sheegay in ay soo saartay mashiinka kaafiga kowaad ee Faransiiska. Waxay ku salaysnayd nidaam farsamo. Teeda kale, farsamooyinka istiraatiijiyaddu waxay sidoo kale soo saari kartaa Hermann Eicke ee Berlin, si ay labadan mashiinnadood oo taariikhda qaxwaha ah ku doodaan ku saabsan cidda ugu horraysa ee mashiinka kafeega ee dunida.
Mashiinnada ugu horreeya ee semi-automated waxay ahaayeen qalab biraha ah, oo lagu shaqeeyo khamriga. Kaliya tobanka sano ee hore ee 20. Waxaa jiray habab koronto ku shaqeeya. Doolowgu waa muunad ahaan muhiima oo muhiim ah, taniyo halkan kaafiga waxaa lagu cadaadiyaa biyaha uumiga iyadoo loo marayo shaandho. Maaddaama heerkulka dhirta uu ka sarreeyay darajooyinka 10, farsameyaashu wali waxay awoodi karaan inay sii wataan cilmi-baaris dheeraad ah ayna ku-hagaajiyaan qaabkooda.
Qalabka ugu horreeya wuxuu ahaa shirkad balaadhan oo laga bilaabo 20. Tani ma ahayn doorasho la awoodi karo - marka laga reebo in qaxwada lafteeda ay sidoo kale ahayd mid aad u qaali ah oo soo jiidasho ah, sidaa darteed in muraayadda weyn ee mashiinka qaxwada ayaa weli ah waddo dheer.
Wigomat, oo lagu magacaabo Gottlob Widmann, ayaa horseeday horumar bulsho ka dib Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Noocani waxay matalaysay mashiinka kookaha casriga casriga ee ugu horreeya, kaas oo ka faafay Jarmalka oo ku barokacay noocyada hore loo isticmaalay. In ka sano in yimaadeen noo 1970er maanta nidaamka loo yaqaan la saxan iyo kafeega kulul filtarrada suuqa oo u adkaaday sababtoo ah halka ay fududaato in la isticmaalo, ilaa laga sii kordheysa barakacay ee 2000ern nidaamyada suuf iyo kaabsal.
Mashiinnada sariirta iyo qalabka kumbuyuutarka, makiinadaha qaxwada waxay ku noqdeen qalab jajab leh. Waxay beddeshay oo kaliya habka loo sameeyo qaxwada, laakiin sidoo kale suurta galnimada mashiinada. Mashiinka maanta maahan qalabka la adeegsan karo oo keliya, laakiin waa habka farsamo-farsameedka. Intaa waxaa dheer, waxay ku riyaaqayaan xawaaraha, taas oo, markaa, kafeega delicious waa la raaxaysan karaa. Marka la barbardhigo, Wigomat waxay qaadatay wax ka badan shan daqiiqo si loogu diyaariyo kafeega.
Aan sugno oo aragno waxa cusub ee farsamada ah ee noo yimaada.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido-darrada mashiinnada kaabayaasha
Xaqiiqda runta ah. Maxaa ka kala soocaya nidaamka kumbuyuutarka, maxay yihiin dhibcaha iyo, intaa ka sarreeya, halka ay weli u baahan yihiin horumarinta?
Qaxwada qaybteeda ayaa leh kalluumeyaal marka ay timaado raaxo, dhakhso iyo waqti isku mid ah diyaarinta qaxwaha. Hawlgalku waa mid aad u fudud, natiijaduna waxay la socotaa qaxwad kasta oo leh shimbir brown ah. Kufsiyada cirridka ku xiran waxay xaqiijinayaan in qaxwada koofiyadu ay tahay nadiif ah.
Faa'iido kale oo ka mid ah mishiinada ayaa ah in ay aad u yaryihiin oo ku haboonaan karaan jikada kasta. Intaa waxaa dheer, ma aha oo kaliya maareynta, laakiin sidoo kale noloshooda farsamda gudaha waa mid fudud, kaas oo si cad uga faa'iideysanaya nadaafadda. Moodooyinka ayaa leh tuubooyin ah oo keliya biyo kulul oo uma baahna qaybtooda soo jiidashada ah tan iyo markii qaxwaha lagu daadiyo cadaadiska biyaha ee kumbuyuutarka laf ahaantiisa. Tani dhab ahaantii waa faa'iido wayn. Gaar ahaan marka ay tahay inay si degdeg ah u tagto aroortii iyo hal dariiqa xafiiska si dhakhso ah kafeega u tago musqusha. Sidee ugu fiican mashiinnada si dhakhso ah u kulul!
Khasaaruhu waa badi sakhradda iyo deegaanka. Marka la iibsanayo go'aanka iibka mashiinka kumbuyuutarka waxa uu ku xidhan yahay farsamada kumbuyuutarka, kaas oo haysta noocyo badan oo kala duwan oo digir ah iyo dhadhan. Kuwa doonaya in ay tijaabiyaan qulqulka kala duwan iyo digirta, tani waa xaqiiqo daro.
Kharashka kaabsoolka waa in sidoo kale la tixgeliyaa. Xitaa haddii iibsashada mishiinka kaabsigu yahay jaban, kharashka hawlgalka ayaa noqon kara mid aad u weyn. Cuntada qaybta ah, casho qaali ah oo leh qiimaha laga bilaabo 19 illaa 60 Cent per capsule kiis kasta. Dhibaato kale oo loogu talagalay dadka caanaha kafeega ah ayaa ah in mashiinnada kaliya ay bixiyaan habka dhirta.
Ka dibna waxaa jiri lahaa wajiyo badan oo lagu dhaleeceynayo jawiga deegaanka, sababtoo ah koob kasta wuxuu soo saaraa qashin. Iyadoo isticmaalka maalin kasta dhowr koob dhacdaa waqti aad u gaaban buur qashinka badan gudahood - haddii mid ka mid isticmaalaa kaabsal karo, si kastaba ha ahaatee, taas oo macnaheedu yahay shaqo dheeraad ah oo si fiican u taagan dhadhan khasaaro.
Gacanta ku hay wadnaha: Yaa iibsanaya mashiinka kaabsarka ee waxtar leh?
Helitaanka mashiinka kumbuyuutarka waa mid macquul ah oo loogu talagalay dhalinyarada, shaqooyinka mashquulka ah ee ku lug leh hal qoys. Waad ku mahadsan tahay furaha hawadu xiran tahay, kafeega waxaa lagu keydin karaa wakhti dheer iyada oo aan lumin dhadhankiisa. Qalabka wax lagu cuno ee qurxinta leh, quruxda leh ayaa ku habboon jikada yar oo u ogolaanaya in si degdeg ah loogu diyaariyo kafeega tayo sare leh.
Philips HD7546 / 20 Gaia mashiinka qaxwaha oo leh cabir thermo, madow / birta dhalada
Loogu talagalay qaxwaha kulul oo hada la sameeyay
Kafeegaaga wuxuu ka sii kululaa iyo udgoon wanaagsan
Xiritaanka otomaatikada ka dib marka la jajabiyo
Shaqada joojinta wadista ee hakinta habka kala goynta sida loogu baahdo
Baaxadda sahayda: Philips HD7546 / 20 Mashiinka qaxwaha Thermo oo ay ku jiraan haanta loo yaqaan 'thermo jug' iyo filter filter, hayaha adeegsadaha
dalabXayawaan bixinta 2
Melitta Easy 1023-02, Mashiinka qaxwaha miiraha qulqulka dhalada, Naqshadeynta Compact, Tusiyaha Madoow
Naqshadeynta is haysta: mashiinka qaxwaha shaandhaysan oo kuxiran galaas qiyaastii 10 koob, oo ku habboon bacaha shaandhada Melitta cabirkiisu yahay 1x4
Ku raaxeysiga qaxwaha shaqsiyeed: horumarka carafida oo dhan waxay u mahadcelinayaan heerkulka ugu wanaagsan ee soosaarka, raaxada buuxda iyo kafee kulul
Fudud in la isticmaalo: Beddelidda / shididda ku shubma, Haanta Biyo hufan oo leh cabbirka si-fudud loo akhriyi karo, filter shaandheyn ah oo la qaadi karo oo la adeegsado oo leh isugeynta dhibic isku dhafan, wareejin xadidan otomaatig ah
Baaxadda sahayda: 1 Melitta Easy 1023-02, makiinadda qaxwaha shaandhaysan oo leh weelka dhalada ah, madoow, 1050 Watt
Mashiinka kafee qaxwada Senseo ee loo yaqaan 'Philips HD6554 / 68 Mashiinka kafee qaxwada Senseo, tilmaame madow
HD6554 / 68 Senseo Cusub Asalka wuxuu u diyaariyaa qaxwaha macaan iyada oo loo marayo nidaam soo saarid u gaar ah taabashada badhanka oo leh koobabka 1 - 2
Crema Plus xitaa cufnaanta, dahabka-brown iyo kareemka dhalaalaya oo leh kafee kasta
Isku-habeynta xoogga kafeega si aad u kala doorato mid yar, xoog leh ama qafiif ah, kafee caadi ah
Xulasho balaadhan oo ah koollada dhadhanka iyo aluminium la'aan
Hawlgal fudud ayaa mahad leh Midka Nidaamka Taabasho ee qaxwaha macaan ee riix batoonka
dalabXayawaan bixinta 4
Mashiinka qaxwaha MEDION oo leh digsi kuleyl ah iyo saacad (mashiinka filter, 8-10 koob, 1,2 litir, 900 watts, 3 heerar, shaqo hayn-diiran, saacad saacad, anti-daadinta, soosaarista, MD18458) bandhigay bir daxalowsan
Mashiinka qaxwaha MEDION oo leh heerkul iyo saacad, 900 watts oo awood ah, 1,2 litir oo awood ah oo ah 8-10 koob
Had iyo jeer diyaar u tahay: mahadsanid howsha diiran, waad ku raaxeysan kartaa kafee kulul waqti kasta.
Waqti ku habboon buu ku habboon yahay: Ku raaxayso kafeega isla markiiba ka dib markaad kacdo iyo dadaal la'aan.
U dabacsan tahay sidaad tahay: samee ilaa 10 koob oo kafee qaxwaha ah mar alla markii loo baahdo.
Baaxadda gaarsiinta: Mashiinka qaxwaha MEDION oo leh heerkul qulqulaya MD18458, 1 diirimaad diirran oo leh dabool cirib ah, weelka filter, qaadada qaadashada
De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B - Mashiinka qaxwaha leh xarkaha qabow, badhamada xulashada tooska ah & garaacista, shaqo koobkii 2, haanta weyn ee biyaha 1,8 l, 35,1 x 23,8 x 43 cm, tilmaame madow
Fududeeynta Isticmaalka: Mashiinka qaxwaha wuxuu leeyahay badhammo toos ah oo xulasho ah oo loo isticmaali karo in lagu amro hal ama laba koob iyo garaac kuu oggolaanaya inaad adigu gacantaada ku hagaajiso awoodda iyo qaddarka kafeega.
Natiijad caano qabow: Caanaha gaarka ah ee loo yaqaan 'frothing nozzle' waxay awood u siineysaa takhasusyada qaxwaha macaan, laga bilaabo cappuccino kareem ilaa caffè latte ilaa velvety latte macchiato.
Way fududahay in la nadiifiyo: Kooxda cillad-samaynta yar-yar ayaa gabi ahaanba laga saari karaa mashiinka qaxwaha oo way fududahay in la nadiifiyo.
Booqday Furimaha Deggan oo aad u deggan: Miraha-xaragada leh ee loo yaqaan '13-conical grinder' waa la hagaajin karaa si shaqsiyan ah, digirta '250 g' oo ku habboon weelka - mashiinka si buuxda otomaatig ah ayaa sidoo kale ku habboon budada kafee sida kafee-kafee-ka-madax-bannaan.
Baaxadda sahayda: 1 x Magnifica S ECAM 22.110.B, mashiinka qaxwaha oo madoow oo caano qabow laga keenay De'Longhi.
Timops HD5408 / 20 Cafe Gourmet Filter Mashiinka Qaxwaha ah, Mabda Tooska Tooska ah, Muujinta Madoow / Jumlad La'aan
Mabda 'gundhigga tooska ahi wuxuu xaqiijinayaa koritaanka ugu wanaagsan ee carafida ah sababtuna tahay heerkulka dillaaca sare ee 93 ° C
Aroma Twister: xaraashka ayaa u oggolaanaya kafeega inuu ku shubo dheriga si uu ugu dhex wareego dheriga si ay ugu fiicnaato oo xitaa caraf udgoon
Qalabka kuleylka labalaab si aad u ilaaliso heerkulka qaxwaha
Shaqada joojinta gawaarida, xirida otomaatigga ah iyo daboolka xiisaha leh ee si fudud loogu buuxin karo haanta biyaha
Jumcaha iyo shaandhada miiraha ayaa aamin ah
dalabXayawaan bixinta 7
Philips HD7767 / 00 Grind iyo Brew Filter Kafee Kafee, Balaastikada, Qalabka Aan Bilaashka / Buluugga Tilmaama
Thanks to Grind & Brew HD7767 / 00 oo leh weel isku-dhafan oo bir-dhalaalaya, waxaad ka diyaarin kartaa qaxwadaaga digirta dhulka ka cusub
Booqdaynta loo yaqaan 'cone grind' oo leh weel la xulan karo ilaa koobabka 30.000 ee kafee
Daboolka AromaSeal ee digirta darayga ah ee waara
Si wanaagsan caraf udgoon, Aroma Twister wuxuu qaybiyaa qaxwaha qiiqa si siman jaarka
Qalliin sahlan oo leh garaacida badan (doorashada awooda kafee, tirada koobab, Booqday)
Mashiinka qaxwaha SEVERIN, ee kafee shaandhada dhulka, koobab 8, incl. Xaragada 2, KA 9233, tilmaame cad
Mashiinka qaxwaha tayo sare leh ee filterka qaxwada udgoon ee aroorta iyo inta u dhaxaysa - Illaa koobabka '8', oo ku habboon qaxwada shaaha cabbirka, Incl. Xaraaradda 2
Ku raaxeysiga qaxwaha shaqsiyeed iyadoo la kala duwanaanayo qadarka kafeega iyo biyaha, cusub oo kululna waxaa mahad leh qulqulka heerkulka oo leh badbaado caraf ah iyo daboolka kaydinta heerkulka muddada dheer
Fudud in la adeegsado: shidida / daarista nalka nalka, tusaha heerka biyaha oo cad oo hufan, weel biyo ah oo si sahlan looga buuxiyo, shaandhayn wareega
Tayada Jarmalka, Guryaha balaastigga ah oo tayo sare leh, Qolka isku-dhafan ee isku-xirka kaydinta fudud ee fiilada, On / Off Off with nalka tilmaameedka, Fudud oo gacanta lagu nadiifiyo
Baaxadda gaarsiinta: Mashiinka qaxwada ee 1 SEVERIN, KA 9233, incl. 2 Thermos, Maaddada: Caagga, Caaga (LxWxH): 24 x 22,5 x 36 cm, Miisaanka: 2,108 kg, Awoodda: qiyaasta 800 W, Midabka: Caddaan / Cawlan
dalabXayawaan bixinta 9
Bosch TKA6A044 kafeega Raaxada Line, garaafo muraayad ilaalinta caraf udgoon, daqiiqo xadka si toos ah selectable in 20 / 40 / 60, 1200 W, bandhigay cas / anthracite
Kareemka qaxwaha oo buuxda sida kudhisan dhadhanka shaqsiyeed mahadsanid udgoon leh badhanka
Buuxinta ayaa si fudud looga dhigay haanta biyaha la qaadi karo
EasyDescale3: Farxad dheer oo raaxaysi leh iyadoo la adeegsanayo caawimaad wax ku ool ah oo xagga dibuheshiisiinta ah
Badbaadada iyo raaxada badan: Xadidaad xadidan otomaatig ah oo leh waqtiyo laga demi karo
Nadiifinta dheriga dheriga illaa furitaan ballaaran
dalabXayawaan bixinta 10
Mashiinka qaxwaha ee Russell Hobbs Adkexumeenn oo bir la'aan ah, jug galaas ilaa koobabka 10, 1,25l, saxanka kulul, xirida tooska ah, istaajinta, 1100 watts, filter filter mashiinka qaxwaha 24010-56
Tiknolojiyad soo saarista WhirlTech - waxay si fiican ugu kululaysaa kafeega biyo waxayna hubisaa caraf wanaagsan
Jug galaas oo tayo sare leh oo leh dabool leh iyo calaamad wax lagu buuxiyo, hotplate
Sarkaalka shaandhada leh ee meesha laga saari karo, isla markiiba la istaajin karo, joogsiga dhibic ee meesha laga saari karo
Muuqaalka heerka biyaha ee dibedda leh sumad buuxin, qaaddo cabir isku-dhafan, nal muujiye
Awoodda koobabka 10 (1,25 l), dusha sare ee tayo sare leh oo bir jilicsan oo bir leh oo leh barnaamijyo caag ah, 1.100 Watt
Maqaalka horeDog cuntada
aalado lagu dhaqdo